Olom-pirenena an'ny Antigua sy Barbuda Dependents | Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda
Olom-pirenena momba ny antokontany Antigua sy Barbuda
Ny rindranasan'ny fianakaviana dia hoheverina mba hampiditra ireo mpianakavy manaraka ireto;
Vady vadin'ny mpangataka fatratra
Zanaky ny mpisolo toerana lehibe na ny vadiny izay latsaky ny 18 taona
Zanaky ny mpangataka voalohany na ny vadiny izay 18 taona latsaky ny 28 taona ary XNUMX taona ary efa manatrika manontolo andro ao amin'ny sekoly fampianarana ambony ary notohanan'ny mpangataka voalohany.
Ankizy iray avy amin'ny fangatahana lehibe na ny vadin'ny mpisolo vava be indrindra izay 18 taona, fara fahakeliny, izay manana fanamby ara-batana na ara-tsaina, ary miara-miasa sy manohana tanteraka ny mpangataka fatratra.
Ray aman-dreny sy raibe sy renibena ao amin'ny fangatahana lehibe na an'ny vadiny mihoatra ny 58 taona miaina sy manohana tanteraka ny mpangataka fatratra.
Ho an'ny tanjon'ny Olompirenena Antigua sy Barbuda amin'ny alàlan'ny Programme Investment Investment 'dia midika hoe zanaka natsangana ara-dalàna na vadin'ny mpisolo toerana voalohany.